plexiglass machira vagadziri & vanotengesa - China plexiglass machira fekitori
Kukwirwa nemishonga plexiglass inoreva iyo plexiglass ine yakakwira pamusoro peukuoma, kukwenya kwekudzivirira. Izvo zvakasikwa zvivakwa, zvemuchina zvivakwa, uye mamiriro ekunze kusagadzikana zvakada kufanana neyakajairwa plexiglass. Iko kuomarara kwepamusoro kwakakwirira, kukwikwidza kuramba, kukwikwidza kusagadzikana, uye chemakemikari ngura kuramba.
2. Yakanaka magetsi kuputira, yakareruka kurema.
4. Strong pamusoro peukukutu uye yakanaka mamiriro ekunze kuramba pfuma
4.In dzimwe nzvimbo: Manyiminya zviridzwa, zvemagetsi ukomba, mwenje mwenje, mota muswe mwenje uye dzakasiyana mota hwindo, zvigadzirwa zvemaoko, runyoro, kusaina bhodhi nematoyi etc.